Kodzero-dzevanhu, 06 Nyamavhuvhu 2019
Chipiri 6 Nyamavhuvhu 2019
Kushaikwa kweMagetsi Kwopa Kuti Vanhu Vashande Husiku
Kushaikwa kwemagetsi munguva dzinenge veruzhinji vari kuita mabasa akasiyana siyana kwava kupa kuti vamwe vanhu pamwe nemabhizimisi vashande kwenguva pfupi munguva dzehusiku apo magetsi anenge achiwanikwa.
Hurumende Yoronga Kuongorora Madzimai Akawanda Chirwere cheGomarara
Hurumende inoti inotarisira kuve yaongorora gomarara remuromo wechibereko pamadzimai mamiriyoni matatu nemazana maviri panozosvika gore ra2020.
VaMnangagwa Vanoti VaMugabe Vave neMwedzi Mina Vachirapwa kuSingapore
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vari muchipatara kuSingapore.
Mamwe magaraji anotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari muChinhoyi ave kuramba kutengesa mafuta neEcocash kana Swipe vachiti vanoda maBhondi chete.
Nhengo dzeARTUZ Dzoronga Kuungana paMahofisi aVaMthuli Ncube
Ukuwo, rimwe sangano revarairidzi, reProgressive Teachers’ Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti nekuda kwekukwira kwaita mari dzekubhadhara mukufamba, nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa mazuva asara ekuti zvikoro zvivharwe nemusi weChina svondo rino.